Chii chinoshandiswa nandrolone decanoate injection? | AASraw
/Blog/nandrolone decanoate/Chii chinoshandiswa Nandrolone decanoate injection?
Posted on 10 / 31 / 2017 by 阿斯劳 akanyora nandrolone decanoate.
Deca Durabolin, inowanzonzi "Deca", ndiyo zita rezita Nandrolone decanoate (C28H44O3), anabolic steroid iyo inovandudza kubudirira kuburikidza nekuwedzera simba uye simba, kuderedza kuneta kwemaviri, uye kuwedzera kukura kwemisumbu. Inopa zvikomborero zvakapfurikidza kwenguva uye zvishoma nezvigumisiro zvayo kana zvichishandiswa zvine musoro. Kutenda kune zvakasiyana-siyana zvemasero anobudirira, varume vazhinji vanozvitsigira zvakanaka. Dzidza zvakawanda nezvaDaa Durabolin kutengeserana pasi kuti uone kana iri rakakosha iwe.
Deca Durabolin poda Mbiri - Chii chinonzi Deca Durabolin poda yakasviba?
Deca Durabolin poda mbishi yekutengesa ndeye yakanyanya anabolic steroid ine mashoma kwazvo ayrogenic zvivakwa, zvinoreva kuti inopa yakawandisa mibairo ine mashoma kwazvo asingadiwe mhedzisiro kana ikashandiswa zvine mutsigo. Iyi yekunze-mwaka mukomboni haiwedzere huremu nekukurumidza sezvinoita vamwe, uye ine hurefu hwakareba hafu-yehupenyu sezvo ichienderera ichiburitsa mumuviri kwenguva inosvika kumavhiki matatu. Dzimwe steroid dzinowedzera uremu nekukurumidza, asi hwakawanda hwehuremu ihwo mvura. Deca Durabolin mbichana mbichana mhedzisiro dzakasiyana. Zviwanikwa zvinouya zvishoma nezvishoma, asi zviri zvemhando yepamusoro. Kugadzirisa chinononoka-kuita chimiro cheDeca, vazhinji vavaki vemuviri vanokanda-kutanga macircle avo nekukurumidza kuita komputa senge Dianabol.
Deca Durabolin poda mbishi yekutengesa inouya mune injekiseni mafomu, mapiritsi, uye zvinwiwa. Nekudaro, nekuti mapiritsi uye macapuleti anotora nguva yakareba kuti ashande uye haawanikwe zvakanyanya, mazhinji bodybuilders sarudza injections. Nenzira isina kuvhara, hapana imwe yenhengo inorasika panguva yekudya uye iwe unogona kuwana mhinduro dzakanaka milligram ye milligram. Zvichida, nokuti iyi inononoka-inogadzirisa zvinodarika vamwe, hauzoni "kukurumidza" iyo dzimwe steroid inogona kukonzera.
Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vachidavira kuti Deca Durabolin mapiritsi kana injikisi ndeyekungobvongodza, izvi hazvisi zvechokwadi. Vatambi vakawanda vanoona kuti chirwere chinonzi Deca Durabolin regimen panguva yekucheka maitiro anoshandawo. Panguva yekucheka, vatambi vanodya uye vanoita zvekurovedza muviri kuderedza mafuta emuviri. Zvinosuruvarisa, chikafu ichi uye kurovedza muviri zvinowanzokonzera kuneta uye kusava nesimba, pamwe chete. Sezvataurwa pamusoro apa, kuwedzera nemutengo wakaderera waDaa Durabolin munguva yekubata chikamu kunogona kuwedzera simba uye simba, nokudaro zvichibatsira kubvisa michina yakafanana Winstrol shanda zviri nani.
Kuvharidzirwa kwehutano hwakareba kusvika kumavhiki e18 nechigadzirwa ichi, kunyange zvazvo iwe uchiwedzera, iko kupfupika kwako kunofanira kuva. Semuenzaniso, kana iwe ukatora 300mg chete kwevhiki, imwe ye18-vhiki yakachengeteka. Asiwo, kana ukasarudza chikwata chapamusoro, unogona kupedza kuronga kwako kumasvondo e12 chete. Izvi zvinobatsira kudzivirira zvimwe zvingave zvisingadikanwi zveDeca Durabolin migumisiro, yakadai sekuora mwoyo kwenguva refu kana zvinetso zvepvo.
Kupi Tenga Ichokwadi Nandrolone Decanoate pikisi yakasara online?
Iwe unogona kuwana zvizhinji zveNandrolone Decanoate source yakasviba pombi online, asi zvakaoma kutenga Genuine Nandrolone Decanoate powder online. Pane zvakawanda zvinotengesa kutengesa zvigadzirwa pamusika. saka kana iwe uchitenga Nandrolone Decanoate pikisi yakasvika paIndaneti, unofanira kusarudza realable source.
Zvimwe tsanangudzo pamusoro pezvinokosha,gamuchirai kuti munyore pano.
Maitiro Ekugadzira Anopedza Testosterone Cypionate Kubva kuRaw Steroid Poda PCT Letrozole poda yakasviba-Zvinhu zvishanu ndinofanira kuziva !!!